“Qofkasta oo Madoow ah waa inuu iska difaaco Leonardo Bonucci iyo dadka la midka ah.”.- Thuram – Gool FM
“Qofkasta oo Madoow ah waa inuu iska difaaco Leonardo Bonucci iyo dadka la midka ah.”.- Thuram
Byare April 5, 2019
(Europe) 05 Abriil 2019. Daaficii hore ee Juventus Lilian Thuram ayaa dhaleeceyn xoogan u soo jeediyay daafaca iminka ee Juventus Leonardo Bonucci isagoona dadka Madoowga ah ugu baaqay inay iska difaacaan Bonucci iyo dadka la midka ah.
Xasaradan waxaa kiciyay daafaca reer Talyaani ee Bonucci kaddib hadalkii uu ka yiri da’yarka Madoowga ah ee weerarka kaga ciyaara Juve iyo xulka Talyaaniga ee Moise Kean kaddib ciyaartii ay 2-0 uga adkaadeen Cagliari.
Taageerayaasha Cagliari ayaa si xun u cunsuriyeeyay Kean iyagoo ku tilmaamayay daanyeer, balse waxaa yaab noqotay in Bonucci halkii uu difaaci lahaa wiilka ay isku kooxda yihiin uuba isagu eeda dusha ka saaray.
Moise Kean ayaa aalaaba sameeya dabaal deg ka careysiiya kooxda ka soo horjeeda, Bonucci ayaana ciyaarta kaddib sheegay in eedu tahay “50-50” oo wuxuu ula jeedaa in da’yarka uu isagu keensaday in la cunsuriyeeyo sababo la xiriira dabaal degiisa taas oo dad badan ka careysiisay.
Daaficii hore ee xulka qaranka Faransiiska Thuram ayaa aaminsan in hadalka Bonucci uu la mid yahay Cunsuriyeentii uu Kean kala kulmay taageerayaasha Cagliari.
“Kean saaxiibkii ku kooxda ah wuxuu yiri wuu u qalmay Cunsuriyeentii lagula kacay isla markaana ay tahay in taageerayaasha ay sii wadaan cunsuriyeenta,” Thuram ayaa sidaa u sheegay Le Parisien.
“Fal Celintii Bonucci waa rabshado la mid ah falkii Cunsurinimada ay taageerayaasha ku qeylinayeen.
“Bonucci Doqon maaha, Hadaladii Bonucci waa kuwa ceeb ah.
“Qofkasta oo Madoow ah waa inuu awoodaa inuu iska difaaco dadka la midka ah Bonucci.”.
De Bruyne oo shaaca ka qaaday xulka uu u arko inuu ku guuleysan karo Koobka Kooxaha Yurub ee Euro 2020
Cristiano Ronaldo oo noqday wakiilka shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee SEVEN BRAND